‘छोड… मलाई छोड… भन्दै उ ढलेको थियो ’ | Diyopost - ओझेलको खबर ‘छोड… मलाई छोड… भन्दै उ ढलेको थियो ’ | Diyopost - ओझेलको खबर
‘छोड… मलाई छोड… भन्दै उ ढलेको थियो ’
bestnp मंगलबार, जेठ ०४, २०७३ | ४:०३:१३
काठमाडौं ३ जेठ । त्यो समय दोस्रो जनआन्दोलनको पाँचौ दिन थियो । गोङ्गबु क्षेत्रमा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच ‘युद्ध’ चलिरहेको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलले गोली चलाएपछि आन्दोलनकारी उत्तेजित थिए । फोटो पत्रकार कुमार श्रेष्ठ भिडियो खिच्दै थिए । आन्दोलनकारीको प्रहारबाट सशस्त्र प्रहरीका एक जवान त्यही ढले । उनको अनुहार रक्ताम्य भयो । आन्दोलनकारीको प्रहार रोकिएको थिएन । तस्बिर लिन छाडेर कुमार ती जवानलाई अंकमाल गर्न पुगे । तर आन्दोलनकारी ‘हान्…हान.. ’ भन्दै ढलेका ती जवानमाथि फलामको रड बर्साउँदै थिए । आफ्नै शरीरले ओत दिएर कुमार चिच्याउन थाले, ‘नहान….ए नहान….अटेरी नगर बाबु ।’
तस्बिर सोजन्य : नरेन्द्र श्रेष्ठ
तर त्यो भिडले कुमारलाई समेत छाडेन उनलाई समेत प्रहार हुन थाल्यो । त्यो प्रहारको बाबजुत कुमारले रक्ताम्य शरीर भएका ती जवानलाई बाकेर पर्खाल नाघे, एम्बेलेन्समा राखे अनि अस्पताल पठाए ।
कुमारले जोगाउँदै गरेको अवस्थामा कान्तिपुर दैनिकका फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठ पनि आए । प्रहरी जवानको ज्यान बचाउँदै गरेको तस्विर भोलीपल्ट कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भयो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले प्रथामिकता दियो । छापिएको फोटोका एक पात्र कुमार श्रेष्ठ १० वर्षपछि पनि अर्को अज्ञात पात्रको खोजीमा छन् । तस्बिरमा देखिएका व्यक्ती जसलाई कुमारले जोगाएका थिए । ‘त्यतिबेला उसलाई जोगाएँ, उसको नाम पनि थाहा भएन । मात्रै उसले बोलेका कुराहरु याद छ,’ कुमार भन्छन्, ‘उसको खोजीमा म अहिलेसम्म पनि छु । किन भने म उ बारे वृतचित्र बनाउन चाहान्छु ।’
फोटो पत्रकार कुमारले त्यतिबेला खिच्दै गरेको भिडियो यस्तो छ ।
उनले बचाउँदै गरेका ती व्यक्तिलाई कुमारले झण्डै १० वर्षसम्म खोजी गरिसकेका छन् । ‘मैले उसलाई खोजेको १० औं वर्ष वित्न लागि सक्यो तर भेटेको छैन,’ कुमार भन्छन्, ‘उसको विषयमा सशस्त्र प्रहरीसँग पनि सुचना मागेँ तर पाएको छैन । कुमार तस्बिर लिएर सशस्त्र प्रहरी बलका हाकीमहरुलाई देखाउन गए तर उनीहरुले पनि पत्ता लगाउन नसकेको भान गरे । ‘सशस्त्रका जवान देखि हाकीमसम्मलाई यो तस्विर देखाउँछु,’ कुमारले भने, ‘खै हाकीमहरुले नि पत्ता लगाउन सकेनन् ।’
जनआन्दोलनको समयमा तस्विर लिँदै कुमार श्रेष्ठ
कुमारको मानसपटलमा त्यो घटना अहिलेपनि ताजै छ ।
‘त्यो मान्छे शत प्रतिशत मर्छ जस्तो लागेको थियो । म भिडियो खिच्न छोडेर बचाउँन गएँ,’ कुमारले सम्झिए, ‘पत्रकार भएर यसलाई बचाउने ? भन्दै मलाई पनि हान्न थाले । हातमा ढुङ्गाले हान्न थाले, त्यो बाबजुत पनि मैले एम्बुलेन्समा हालेर पठाईदिएँ, ।’
फोटो पत्रकार नरेन्द्र श्रेष्ठ कुमारलाई जोखिम लिने फोटो पत्रकारको रुपमा उल्लेख गर्छन् । ‘जब म त्यो ठाउँमा पुगेँ । ‘हान्यो.. हान.. हान जस्ता शब्दहरुमा मानिसहरु चिच्याइरहेका थिए । कुमार ले छेकिरहेको थियो । भिडियो पनि खिचिरहेको थियो,’ नरेन्द्रले सम्झिए्,‘कुमारसँग मेरो त्यतिबेला नै चिन्जान भएको हो ।’
कुमारले यसरी पठाएदेखि नै ती व्यक्तिको खोजी सुरु गरेका थिए । तर प्रहरीले उनीबारे किन लुकायो अहिलेसम्म जवाफ पाएका छैनन् । ती व्यक्तिबारे वृत्त चित्रको ट्रेलर समेत सार्वजनिक गरेका उनी प्रमुख पात्र नै नभेटेपछि रोकिनुपरेको छ । ‘मैले सोही व्यक्तिलाई प्रमुख भूमिकामा राखेर ‘पिपुल्स वार’ नामको ‘डकुमेन्ट्री’ बनाउन थालेको थिएँ,’ कुमार भन्छन्, ‘तर अहिलेसम्म प्रमुख पात्र नै भेट्न सकेको छैन ।’
जनआन्दोलनको समयमा कुमार श्रेष्ठद्वारा खिचिएको तस्विर
नरेन्द्र उक्त घटनालाई पत्रकारीताको पेसा भन्दा माथि सम्झन्छन् । ‘त्यो कुनै ‘फेक’ फोटो होईन,’ उनी भन्छन्, ‘ पत्रकारले रिस्क त लिन्छन् त्यतिबेला कुमारले पेसा भन्दा एक स्टेप माथि उठेर काम गरेको हो ।’
अमेरिकामा फोटो पत्रकारीता गरिरहेका कुमार यतिबेला पनि त्यो फोटो बोकेर हिड्छन् । ‘त्यो घटना यस्तो भाथ्यो र ? जस्तो लाग्छ । तर कहिलेकाँही एउटा मान्छे बचाएँ भनेर खुसी लाग्छ,’ कुमार भन्छन्, ‘हरेक दिन खोजिरहेको हुन्थेँ । यो फोटो बोकेर हिड्ने गरेको छु । अहिलेपनि सम्झना छ, मैले उसको रक्ताम्य शरिर बोकेर एउटा पर्खाल नघाएको ।’
मानव अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय रहेका चरण प्रसाईं उक्त घटनाबारे प्रहरीले सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यो निकै ऐतिहासिक कुरा हो । सशस्त्र प्रहरीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । हाम्रो तर्फबाट सहयोग गर्छौं । तर प्रहरीले त्यो घटना मात्रै होईन धेरै घटनाहरु लुकाएको छ ।’
उनका अनुसार प्रहरीले जनआन्दोलनको बेला भएको क्षति बाहिर ल्याएको छैन । ‘त्यो घटनामा फोटो पत्रकारले खिचेको अनुहार पनि छ । प्रहरीले केही नभएको कुरा त पत्ता लगाउँछ । तर तस्विर समेत भएको कुरा किन लुकायो ?’ प्रसाईं भन्छन्, ‘त्यो अनुसन्धानको विषय हो । प्रहरीले लुकाउन खोजेको देखिन्छ । उहाँले हामीसँग सहयोग माग्नुभयो भने हामी खोजी गर्न सहयोग गर्न तयार छौं ।’
सशस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक दुर्जकुमार राई उक्त घटनाबारे आफूलाई त्यति जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘त्यो घटना के हो बुझ्नुपर्छ, मलाई नाम र परिचय पत्र नम्बर भयो भने बुझ्न सजिलो हुन्छ,’ राईले भने ।
राईले भने जस्तै कुमारसँग उनको नाम र परिचय पत्र नम्बर छैन । ‘त्यतिबेला उसले मधेस तिरको शैलीमा बोलेको याद छ,’ कुमार सम्झन्छन्, ‘छोड… मलाई छोड… भन्दै उ ढलेको थियो ।’
मंगलबार, जेठ ०४, २०७३ | ४:०३:१३